Yan Aung: လမ်းလျှောက်တတ်သောသစ်ပင်နှင့် အတောင်ပံမရှိသော တေးသီငှက် (၄)
အချစ်ကြောင့် သစ်ပင် လမ်းလျှောက်တတ်သွားတာပေါ့နော်..။
လင့်ခ်ပေးထားတဲ့ သီချင်းရဲ့ အဆိုတော် နာမည် သိချင်တယ်...။
သီချင်းနာမည်က “မင်းမသိအောင် ချစ်မယ်” တဲ့.
အဆိုတော်ကတော့ ထူးအယ်လင်းပါ. နောက်ထွက်တဲ့အခွေထဲကပေါ့.
ကော်မန့်အတွက်လည်း ကျေးဇူး... :)